#Waan ogahay waxa uu doonayo inuu sameeyo - Guardiola Oo Niyada Uu Qaboojiyey Sarri | Get Latest News From Horn of Africa
#Waan ogahay waxa uu doonayo inuu sameeyo – Guardiola Oo Niyada Uu Qaboojiyey Sarri
Guuldaradii 6-0 ee Chelsea kasoo gaartay Manchester City ayaa aheyd rikoorkoodii horyaalka Premier League, lakiin Pep Guardiola ayaa sheegay in Maurizio Sarri uu u baahan yahay waqti dheeri ah.Pep Guardiola ayaa u Beer laxawsadey Maurizio Sarri waxana uu ku booriyay Chelsea inay siiso Tababaraha reer Talyaani waqti oo ay ka war sugto, ka dib markii Manchester City ay 6-0 ku xasuuqday kooxda checlse.
Kooxda Sarri ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu dambeysay ee Horyaalka Ingiriska “Premier League” ee ay ku ciyaareen dibadda isku celcelis 12-0 ka dib markii cashar logu dhigaay garoonka Etihad Stadium Axadii.
Sergio Aguero seddexleey u dhaliyay ayey City uu aragtey mid uu ku bareejeynayo Alan Shearer rikoorkiisa 11-aad ee horyaalka Ingiriiska.
Chelsea ayaa 4-0 ayaa bilowga 25 daqiiqo qeybta hore ee ciyaarta lagu dhuftey, Sarri ayaa u sheegay Sky Sports ciyaarta ka dib inuu rajeynayo inuu wadahadal la yeesho guddiga kooxda dhinac mustaqbalkiisa.
Guardiola, inkastoo, aan dareensan yahay in Sarri uu soo bandhigi doono sabir iyo inuu la la kulmay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee City dhirbaaxo xun, taasoo keentay in kooxda aysan ku guuleysan koobkaan iyo kuwao kaleba wa xili ciyaaredkiisa ugu horey waxaan loga fadhiya chelsea in ay waqti siiso tababaraha.
“Waan ogahay waxa uu doonayo inuu sameeyo,” Guardiola ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa’id ka dib markii City ka kormartey Liverpool in kastoo laga yaabo inay ku soo laabato hogaanka horyaalka Ingiriska.
“Qofka nocaan oo kale ah, Ciyaarta Nocaan oo kale ah, kubada cagta ayaa ka caawineysa inaad ka sii fiicneysiid xili kasto oo aad qalad sameyso, waxaay nagu garaaceen Stamford Bridge [December],Haddana mar kale kulankii Napoli ee xilli ciyaareedkii hore [Horyaalka Yurub]Wuxuu Ahaa mid adag Ruunntii waxaay aheyn ciyaar adag.
“Laakiin dadku ma fahmi karaan sida uu yahay sanadka ugu horeeya xili ciyaared aad qabato. Qofku waxaa u baahan yahay waqti, [waxaay] kaliya oo ay ku xiran tahay milkiilayaasha, dadka masuulka ah waa inay aaminaan oo ay fahman in waqti siyaan Tababaraha Sanadka ugu horeya.
“Waxaan u imid Manchester City – Madaxda, guddoomiyeyaasha, agaasimaha kubadda cagta Txiki Begiristain, wuu ogyahay aniga, ma aaminsano inaan xumaanayo markaan guuldareysto ama aan fiicnaanayo marka aan guuleysto, waana sababta aan ugu riyaaqayo Manchester waxa ay aheyd koox fiican, waana sababta aan ku guuleysanay. ”
Sarri ayaa gacan qaadin Guardiola isaaga oo mesha isaga cararey ceeb darteed, laakiin tababaraha City ayaa sheegay inaysan aheyn arin lalayaabo.
“Waxaan la hadlay [kaaliyaha Sarri] Gianfranco [Zola] mana ahan dhibaato” ayuu yiri Guardiola. “Xiriir fiican ayaan la leeyahay isaga ahaan.”
“Waxaan u baahanahay isaga, waan u xiisay haddii uusan ciyaareynin, laakiin waxaan qaatay go’aan oo aan isku dayey inaan noqdo qof daacad ah,” Guardiola ayaa wax ka yiri David Silva, kaasoo keydka fadhiyay.
“Laakiin waxaan u baahanahay in aan ciyaarsiyo Silva sababtoo ah waa ciyaaryahanka adduunka ugu fiican ee boosaskan yar yar ku ficaan, waa wax aan suurtogal aheyn inaan helno, lakiin maanta waxaay aheyd maalin loo baahnaa,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Waxa uu ciyaaray labadii kulan ee ugu dambeysay oo uu ahaa furaha kooxda, gaar ahaan qeybtii labaad ee kulankii Goodison [Park, kulankii Everton], waxaan harsan kulamo badan, waxaana isku dayi doonaa inaan qof walba uu ka qeyb qaato Ciyaaraha soo socda.”